यी हुन् स्वस्थ शरीरका लागि अत्यावश्यक १० तत्व (स्रोतहरु सहित) – Nepali Health
यी हुन् स्वस्थ शरीरका लागि अत्यावश्यक १० तत्व (स्रोतहरु सहित)
२०७५ जेठ ३० गते १०:१४ मा प्रकाशित
४. फाइबर : मानवशरीरले फाइबर पचाउँन सक्दैन । तैपनि शरीरको खाना पोषण सञ्चार गर्न फाइबरको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी पाचन प्रक्रिया र पाचन नली स्वस्थ बनाउन फाइबर जरुरी हुन्छ । प्रतिदिन २० देखि ३५ ग्राम फाइबर शरीरलाई चाहिन्छ । गेडागुडी, फलफुल र सागसब्जीहरुमा फाइबर पाइन्छ ।
५. चिल्लो पदार्थ : शरीरमा भिटामिन ए डी इ र के सोसन र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन र घाउ छिटो निको पार्न शरीरमा चिल्लो पदार्थ चाहिन्छ । प्रतिदिन शरीरलाई चाहिने क्यालोरीको ३० प्रतिशतसम्म चिल्लो पदार्थ सेवन गर्न सकिन्छ । स्वस्थ माछा तथा भेजिटेवल आयल चिल्लो पदार्थको स्रोत हो ।
१० जिंङ्क : शरीरको धेरैजसो इन्जाइम र प्रोटिन जिंकले बनेको हुन्छ । मस्तिस्कको सिजारिसस प्रक्रियामा जिंकको मुख्य भूमिका हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई दैनिक ११ मिलीग्राम जिंक चाहिन्छ । रातो मासु, गेडागुडी अन्न आदिमा जिंक पाइन्छ ।
डडेल्धुरा : खानेपानीमा कोलिफर्म भेटियो